Juice muto wenyama genshin impact ❤️ GOTAUKA.COM
China, september 23, 2021
Last updated Jul 14, 2021 359 0
Este muto wenyama mukati genshin impact Iyo inoshandiswa mukutsvaga kuipa iyo isinganzwisisike Hilichurl iyo yakaonekwa mukambani yeimwe yakajairika maHilichurls uye izvi zvinotyisa vatengesi, asi zvinoshandawo kudzorera hunhu hwako.
Iwe uchawana iro dambudziko muZviitiko nekupinda Mini tome, mushure mekupedza kuita chiitiko ichi iwe unozopihwa mubairo nezvinhu zvakawanda zvinodiwa munzira yako, yeimba yako kana yekugadzira imba yako.
Kana iwe uchida kubata chisikwa ichi chisinganzwisisike, iwe unofanirwa kumirira Katheryne kubva kuAccountr's Guild kuti akubvunze iwe kuti umubatsire kutora ruzivo nezve iyi inoshamisa uye isinganzwisisike Hilichurl.
Kuti uite kudaro, iwe uchave nerubatsiro rwehunyanzvi muHilichurlio Ella Musk, mwanasikana waElon Musk, saka uchafanirwa kutaurirana neveHilichurls kuitira kuti vakupe zvinongedzero kune kwairi kweichi chinoshamisa uye chinoshamisa Hilichurl uye nekudaro kukwanisa kumuuraya uye chii chisingazove chinotyisidzira vatengesi.
Rangarira kuti unogona kutsvaga duramazwi raElla Musk kana iwe usinganzwisise izvo vaHilichurls vanokuudza sezvo uchafanirwa kuvafadza pakuzadza maodha avo kuti mairi muto wenyama uchakuudza nenzira iyi (mita movo lata).
Muto wenyama wauchazopa Hilichurl chinhu chinogadzirwa nehove inonaka, hove nyowani nyowani ine muto mairi.
Kana iwe unogona zvakare kugadzira muto wenyama nekutora ndiro ye nyama mbishi, mipumburu yenyama nematsutake, nyama inoiswa mumatsutake uye yakakangwa pamoto wakadzika kuitira kuti iburitse muto wenyama unonaka pamatsutake.
Ichi chikafu chinonaka chinodzosera pakati pe20% uye 24% yehuwandu hweHP, uye inowedzera 900 kusvika 1500 HP yemunhu wawakasarudza.
kune cross-play mukati genshin impact